Eyona Magnesium L-threonate powder yoMvelisi kunye nomzi mveliso
I-Cofttek yeyona mveliso ilungileyo yeMagnesium L-threonate powder e China. Umzi-mveliso wethu unenkqubo epheleleyo yolawulo lwemveliso (i-ISO9001 kunye ne-ISO14001), ngemveliso yenyanga nenyanga engama-3300kg.
I-Magnesium I-powderate powder Suqobo
Ubunzima Ezinto: 294.495 g / mol
Igama leKhemikhali: I-Magnesium (2R, i-3S) -2,3,4-trihydroxybutanoate
Iintetho: Magnesium L-Thononate
isicelo: I-Magnesium L-Threonate yeyona ndlela ifunekayo yeepilisi ze-Magnesium. Isetyenziselwa ukuphucula inkumbulo, ukunceda ngokulala, kunye nokwenza umsebenzi opheleleyo wengqondo.
I-Magnesium, njengoko sisazi ukuba yimbumba yamaminerali, ebaluleke kakhulu kwimpilo- ikakhulu kwingqondo nakwinkqubo yethu yonke yemithambo-luvo. I-Magnesium-i-divalent cation (i-ion ehlawuliswe ngokuqinisekileyo), ibaluleke kakhulu ekwakheni ngokufanelekileyo imijikelezo ye-neuronal njengoko ibophelela kwii-neurotransmitter receptors kwaye iyinto edibeneyo ye-enzyme ye-neuronal. Ichongwe ngokusisiseko ukunceda ukunciphisa uxinzelelo, uxinzelelo kunye nemicimbi yemithambo-luvo. Kwibala lezonyango elisebenzayo, uninzi lweengcali zempilo zivakalelwa yimfuno yokuncedisa i-magnesium kwizigulana zabo kwizenzo zabo. Okwangoku iSibonelelo seZidlo esinconywayo se-magnesium siphakathi kwama-300 nama-420 eemiligram / usuku kubantu abaninzi, esihlala sifunyanwa ngokutya. Nangona kunjalo, imfuno eqikelelweyo yomndilili (i-EAR) yemagniziyam ayifumaneki ngokutya. Inani elothusayo liphaya. Oku kukhokelela ekunqongophaleni kwemagniziyam enokubangela imiba ethile yezempilo enje ngokulimala kwengqondo, ukuphazamiseka kwemithambo-luvo, izifo zika-Parkinson kunye ne-Alzheimer, intloko ebuhlungu, uxinzelelo, ukonzakala kwengqondo, ukubanjwa kunye neemeko ezinxulumene nethambo. Yilapho iindlela ezahlukeneyo zokuncedisa i-magnesium emfanekisweni. Nangona kunjalo, kukho ingxaki ejikeleze ukusetyenziswa kwemagniziyam efumanekayo njengezongezo kwiingxaki zengqondo nezempilo yengqondo- kubonakala ngathi azifikeleli lula kwingqondo. Uhlobo oluguqukayo lwe-magnesium-Magnesium l-threonate, kubonakala ngathi iyanceda apha.
Isityhilelo-iMagnesium L-Threonate powder
Izongezo eziqhelekileyo zemagnesium zenzelwe ukuthathwa ngcono kwaye neMagnesium I-threonate. Oku kufezekiswa ngokudibanisa okungcono iimolekyuli zemagniziyam ezinceda ukuphucula uzinzo, inqanaba lokufunxa kunye nokusebenza. I-Magnesium I-threonate yeyona ndlela yakutshanje ye-magnesium. Iqela lezazinzulu kwi-Institute of Technology yase-Massachusetts kunye neYunivesithi yase-Tsinghua eBeijing liphuhlise i-Magnesium I-threonate nge-fusion ye-magnesium kunye ne-I-threonate, i-metabolite ye-Vitamin C. Lo mmangaliso zongeza ukuqhuba ngokulula ngesihluzi esikhuselayo seengqondo ukufikelela kwindawo ekufuneka iye kuyo. IMagnesium I-threonate ayisiyendalo ayilutho kuba izibonelelo zayo zinkulu.
Ngokwendalo ifumaneka kwi-Epsom salts, iMagnesium sulphate ayifunxwa ngokulula ngumzimba kwaye ngenxa yoko ineziphumo ebezingalindelekanga ngokunjalo. Ukudibanisa i-threonic acid kunye ne-magnesium, iMagnesium I-threonate yenziwa njengetyuwa enokuhamba ngokulula iye kwingqondo isuka egazini. Kwangoko oku kunokufezekiswa kuphela ngokuhanjiswa kwegazi ngaphakathi. Ngokophando lwezilwanyana le yeyona ndlela isebenzayo yokwenza i-magnesium kwiiseli zengqondo.
Ezi zongezelelo zeMagnesium I-threonate zibonakalise ukuba zezona ndawo zisisiseko zokuxhasa ukusebenza kwengqondo kunye nokwenza usapho lwe-nootropics ngokudibeneyo namayeza amiselweyo.
Ukutya kwale mihla kuswele i-magnesium kwaye ukongeza, amayeza aqhelekileyo afumanekayo anciphisa inqanaba le-magnesium. Kumazwe amaninzi kubandakanya i-United States, ngaphantsi kwe-50% yabemi badibana nokunconywa kwemihla ngemihla okanye isibonelelo (RDA) semagniziyam. Nangona ingqondo ifuna isixa esikhulu se-magnesium, eyona nto iphambili kuyo isegazini.
IMagnesium ibalulekile kwimisebenzi emininzi ye-neurological kunye neemeko ezibandakanya:
Ukonzakala okukhulu kwengqondo okanye ukonakala
Ukuxhuzula kunye neSchizophrenia
Ngelishwa akukho sixa saneleyo se-magnesium esiphelela kwingingqi yengqondo, sithintela ukusebenza kwayo. Kulapho i-Magnesium l-threonate supplementation iba yimfuneko yokugcwalisa ukungoneliseki kwe-magnesium, ngakumbi xa abantu abangayisebenzisiyo ngokwaneleyo i-magnesium kwimithombo yokutya bebonisa imeko ye-neurocognitive state kunye neempawu ezinxulumene noko.
Ingena ngaphakathi ukufikelela kwindawo elungileyo yengqondo, apho kufuneka ubonelelo lwe-magnesium.
Iphucula amandla engqondo okuqhubela phambili kunye nokukhulisa okunceda ekufundeni nasekufundeni ukuba kwenzeke.
Inceda ekuphuculeni ukukhula kweeseli zengqondo ezintsha.
I-Magnesium I-threonate powder Izibonelelo
I-Magnesium inezibonelelo ezininzi zempilo. Ithathiwe ngendlela eyiyo, iyaziwa ukuba yonyusa imood, yonyusa ukomelela ukuze ukwazi ukumelana noxinzelelo, ukuphucula amandla okugxila kunye nokugxila, ukonyusa amandla kunye nokuphucula umgangatho wokulala. Ikwasusa inkungu yengqondo yasekuseni (imeko yokudideka, inkumbulo engeyiyo, kunye nokusilela koqwalaselo kunye nokugxila kunye nokucaca kwengqondo) - uphawu oluqhelekileyo kunye neVestibular Migraine
Amandla engqondo okutshintsha yi-neuroplasticity (ekwabizwa ngokuba yi-neural plasticity, okanye i-plasticity yengqondo). Olu bhetyebhetye luqinisekisa ukuba ingqondo iyakwazi ukwenza unxibelelwano olutsha lwe-neural (iindlela zokudibana) kunye nefuthe lokufunda, inkumbulo, indlela yokuziphatha, kunye nemisebenzi yokuqonda ngokubanzi. Ubuchopho beplastikhi budlala indima ephambili kwinkqubo yokuguga kwengqondo, kunye nelahleko yeplastikhi ekhokelela ekuphulukaneni nomsebenzi wokuqonda. Uphando malunga ne-neuroplasticity okanye i-plasticity yengqondo luyanda kwaye iingcali zezempilo kunye noososayensi bafumanisa ukuba ukonyuka kwamanqanaba e-neuronal cell magnesium kunokuphakamisa ukuxinana kwe-synapse kunye neplastikhi, kuphuculwe ukusebenza kwengqondo. Ikwabonisa iziphumo ezithembisayo zokunceda "ukuphinda ubuyise" ingqondo kwiziganeko zokwenzakala kwengqondo eyenzakalisayo kunye nemicimbi yezempilo yengqondo. Nasiphi na isongezo semagniziyam sisenokungabi luncedo ukujongana nomcimbi-iMagnesium l-threonate kuye kwaxelwa ukuba uwele isithintelo segazi-lobuchopho ukuze anyuse ngokufanelekileyo amanqanaba e-magnesium kwingqondo.
Ukongeza, ikwanazo nezinye izibonelelo zezempilo kubandakanya ukunganyangeki kwi-asthma, cramp kwiimisipha, ukomeleza amajoni omzimba, i-BP ephezulu, i-osteoporosis kunye neemeko zentliziyo.
I-Magnesium l-threonate inefuthe lokuphumla, iyayiphumlisa imithambo kwaye iyanceda ekuthinteleni nasekunciphiseni ukuxhuzula kunye neminye imiba enxulumene nemithambo-luvo.
I-Magnesim l-threonate yomeleza amathambo ngokwandisa ukuxinana kwethambo, ukunciphisa ukudumba, ukuphucula umgangatho wokulala nokucoca indawo yokugaya ukutya.
IMagnesium I-threonate yimveliso entsha kwaye kungoko ayinabo ubungqina bexesha elide bokusetyenziswa kwayo. Oku kwandisa ukubaluleka kophando oluyinyani nangakumbi. Uvavanyo lweklinikhi olwenziwe lubambe ukuthembeka.
Uvavanyo lwezonyango lweMagnesium I-threonate
Ijenali yonyango epapashiweyo inikezele ngolwazi olunomdla kunye nezibonelelo zezempilo zeMagnesium I-threonate. Iqela lokufunda elinabantu abadala abaneemeko zoxinaniso, inkumbulo, ukuphazamiseka kokulala kunye noxinzelelo baphawulwa kwii-4 ezahlukileyo-inkumbulo esebenzayo, inkumbulo yokudakumba, ukugxila kunye nemisebenzi yolawulo. Oku kubandakanya inani lezakhono ezincedayo ekwenzeni iinjongo, ukucwangcisa nokwenza. Izifundo zazilawulwa ngeMagnesium I-threonate ye-3 iinyanga zilandelelana kwaye njengoko bekulindelwe ukuba ichongiwe ukuba inqanaba le-magnesium lenyuke kakhulu. Oku kukhokelele ekusebenzeni kwesifundo kuzo zone iinkalo zovavanyo. Ikwakhokelele ekunciphiseni iminyaka yobuchopho bendalo. Ngamanye amagama, ezi zifundo zikhule phantse iminyaka eli-10 zincinci kwiminyaka yabo yobuchopho. Nangona kunjalo, iMagnesium I-threonate yayingancedi kangako ekuphuculeni ukulala, ukunyusa imood okanye ukunciphisa ukuxhalaba ngaloo nto.
Funda kwizilwanyana zeMagnesium I-threonate powder
Izifundo ezenziwa kwizilwanyana zeMagnesium I-threonate zazineziphumo ezinomdla.
Ixhala lokuphazamiseka xa kuthelekiswa neMagnesium I-threonate
I-Magnesium I-threonate yeyona ndlela iphakamileyo yemagniziyam esebenza njengokuphumla kwendalo kwaye isebenza ngokuphungula iihormones zoxinzelelo, ikonyusa ukuzola kwe-neurotransmitter GABA endaweni yoko. Ikwanceda ekuthinteleni iikhemikhali zoxinzelelo ezingena kwingqondo. Ukuvavanywa kweMagnesium I-threonate kwizilwanyana kuye kwangqina ukuba inokuba sisifo sokuncedisa ekuphazamisekeni koxinzelelo, i-phobias eqhelekileyo kunye nesifo esibuhlungu emva.
I-Magnesium I-threonate ngokuchasene ne-Alzheimer's kunye ne-Dementia
I-Magnesium I-threonate iyaziwa nangokuphatha isifo sengqondo esixhalabisayo kunye nesifo se-Alzheimer. Iigundane kunye neempuku zisetyenzisiwe kuphando lwe-Alzheimer njengoko inkumbulo kunye nokukhula kwengqondo kufana noko kwabantu. Kufunyenwe iMagnesium I-threonate yokunceda ekupheliseni inkumbulo kunye nokwehla kwengqondo kwiigundane.
Kukho umanyano owaziwayo phakathi kwenqanaba elincitshisiweyo le-magnesium kunye nelahleko yememori. Ukunyusa amanqanaba emagniziyam kwiziphumo zokutya kakhulu kwisifo sengqondo esixhalabisayo. Uphando lunethemba kwizinto ezininzi zokuvavanywa kwe-neuroprotective kuvavanyo lweempuku ezibonisa ukuba kunokwenzeka ukunyanga i-Alzheimer ebantwini.
I-Magnesium I-threonate xa ithelekiswa nokufunda kunye ngentloko
Iigundane xa zilawulwa ngeMagnesium I-threonate zibenze baba nobukrelekrele. Babonakalise ukuzimisela ekufundeni nasekuphuculeni ukusebenza, ukongeza kwiinkumbulo ezimfutshane nezexesha elide.
Ubungqina kunye nenkxaso yeMagnesium Threonate
Uphando lokuqala kwi-Magnesium threonate ibonakalisile; ukulungiswa kwee-chromosomes ezonakeleyo, ukonyuka kwinqanaba lemagniziyam kwingqondo xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zemagniziyam, ukusebenza okungcono kwindawo yememori kwaye ngaphezulu kwako konke ukuhlengahlengiswa kweenkumbulo zexesha elifutshane. Ekusetyenzisweni kwemagniziyam nangaluphi na uhlobo emzimbeni, kulindeleke ukuba yenze imisebenzi emininzi ebandakanya imisebenzi yemisipha, ukwenziwa kweeproteni kunye nee-acid ezinamafutha, ukwenza iivithamini ze-B, ukujiya kwegazi, ukufihla i-insulin, kunye nokwenziwa kwe-ATP. Ukongeza, i-magnesium isebenza njengesikhuthazi see-enzymes ezahlukeneyo emzimbeni wonke. Kuyanceda ekwakheni amajoni omzimba.
Ukhetho lweMagnesium I-threonate supplements
Qiniseka ukuba ujonga iilebhile ngononophelo ukuqinisekisa ukuba isongezelelo siqulathe I-Magnesium I-threonate.
Umthamo ophakanyisiweyo weMagnesium I-threonate powder
Ukutya okucetyiswayo okuqhelekileyo kwe-magnesium emadodeni zii-420 milligrams kwaye kwabasetyhini zii-320 milligrams. Nangona kunjalo, oku kuyahluka ngokuxhomekeke kubudala. Akukho ncomo ikhethekileyo icetyiswayo yeMagnesium I-threonate. Nangona i-1500 ukuya kwi-2000 yeemiligram ngosuku kufanele ukuba ibe yindlela elungileyo yesibonelelo sokuqonda. Umzekelo oqhelekileyo wokuthengisa kakhulu yiMagtein enelungelo elilodwa lomenzi leMagnesium I-threonate eye yalingwa nakwizilwanyana. Inezinto ezomeleleyo ezisebenzisa izongezo ezifanelekileyo.
Umthamo ocetyiswayo weMagnesium I-threonate zezi:
Abantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesithathu - 80-240 milligram / ngosuku
Abafazi ngaphezulu kweminyaka elishumi elinesine - 300 -360 milligram / ngosuku
Amadoda ngaphezu kweminyaka elishumi elinesine - 400-420 milligram / ngosuku
Abafazi abakhulelweyo / abancancisayo: 310- 400 milligram / ngosuku
Ngelixa oku kunokujongeka njengedosi enkulu, gcinani engqondweni ukuba liqhekeza kuphela elingena. Ke, i-2,000 milligram ye-Magnesium l-threonate iya kuhambisa kuphela malunga ne-144 milligrams ye-elemental magnesium, ephantse ibe sisithathu se-Recommended Dietary Allowance ye-magnesium.
Izizathu zokujonga imithombo emininzi yemagniziyam
Akukho nto ikuthintelayo ekuqwalaseleni iindlela ezininzi zemagniziyam njengemagniziyam glycinate, icitrate okanye igluconate. Zininzi iindlela ezikhoyo ezikhoyo kwikhawuntara yokutya i-magnesium. Uphawu lokuchonga ukutya okwaneleyo kwemagniziyam zizitulo ezivulekileyo kwaye zisebenza njengophawu olubomvu.
Ukufakwa ngomlomo nge-Magnesium l-threonate kuye kwaxelwa ukuba kuthathe ubuncinci inyanga ukunyusa amanqanaba e-magnesium engqondo kumanqanaba afanelekileyo apho inokujongana nokuphazamiseka kwengqondo, njengoxinzelelo, unxunguphalo kunye nelahleko yememori enxulumene nobudala kunye nefuthe elibalulekileyo kwimemori ukwakheka kunye nokusebenza kwengqondo.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeMagnesium I-threonate
Zimbalwa kakhulu iziphumo ebezingalindelekanga zeMagnesium I-threonate ebandakanya ukozela, intloko ebuhlungu, ukungahambi kakuhle kwamathumbu kunye nokuziva ngathi unesiyezi. Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo zesongezelelo se-magnesium yinkqubo yokwetyisa. Nangona kunjalo, ngeMagnesium I-threonate, akufuneki yenzeke njengoko yenzelwe ukuba inyanzelwe ngqo kwingqondo. Ukuba ukule naliphi na iyeza, kuyacetyiswa ukuba ubonane nogqirha okanye ugqirha ukuze ufumane iingcebiso ezingcono. I-Magnesium ayikhuthazwa kubantu abanezifo zezintso njengoko zihlala zikhupha i-magnesium emzimbeni wakho.
Umbuzo wokwenyani ngowokuba - ngaba iMagnesium I-threonate kufuneka ithathwe nenye i-magnesium nezongezo? Ukuba uthatha i-magnesium kwimiba yokwetyisa, zama ukuthatha iMagnesium I-threonate. Ukuba uqala ukuziva ubanjiwe okanye ulindle, kuya kuba bubulumko ukubuyela umva kwimagnesium. I-Magnesium l-threonate ene-caffeine inokuphucula ukusebenza kwengqondo kunye nokusebenza komzimba kodwa xa ixhomekeke kuyo, inokubangela ukuba umzimba urhoxe ekukhathaleni, ekusebenzeni kwengqondo okungalunganga, kunye nokucaphuka ukuba awaqhubeki ethathwa. Esi sizathu sokutshintsha okukhulu kwemood kwabanye abantu kunye nokungabikho komdla kunye nokuzimisela ukwenza imisebenzi yomzimba. Omnye umbuzo obuzwa rhoqo ngowokuba kungathatha ixesha elingakanani ngaphambi kokuba ubone utshintsho lokwenyani? Iingcali zezempilo zicebisa ukuba ulinde iiveki ezi-4 ukuya kwezi-8 ngaphambi kokuba ulahle imipu yakho!
Abantu abanemicimbi yentliziyo
Abantu abangalawulekiyo iBP ephezulu (≥ 140/90 mmHg)
Abantu abanengxaki yokugula ngengqondo abafuna ukulaliswa esibhedlele kunyaka ophelileyo
Abantu abane-renal okanye i-hepatic impairment / isifo
Abantu abanesifo seswekile
Abantu abanesifo se-thyroid esingazinzanga
Abantu abanesifo sokungakhuseleki njenge-Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome
Abantu ababandakanyeka ekusebenziseni iziyobisi okanye iziyobisi kwiinyanga ezilishumi elinambini ezidlulileyo
Abantu abaphethwe ziibroti ze-carotid, i-lacunes eqinisekisiweyo, uhlaselo lwexeshana lwe-ischemic kunye nesifo se-pulmonary
Abantu abaneemeko apho isongezelelo sinokubangela ukuphikiswa kwe-positron emission tomography (PET), kubandakanya ukubetha okanye isifo sentliziyo kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo okanye ukungakwazi ukulala iyure enye
Abantu abakumayeza angavunyelwanga ukuba athathwe kunye nezongezo zemagniziyam njengabacoci begazi kunye namayeza okubulala iintsholongwane.
Abantu abanokungabikho komzimba okanye uvelwano nasiphi na isithako esisetyenzisiweyo kwisongezelelo
Abasetyhini abakhulelweyo, abancancisayo, okanye abaceba ukukhulelwa kufuneka babonane nogqirha ngaphambi kokuthatha olu ncedo
Ukukhetha isongezelelo esifanelekileyo: Uhlaziyo lweMagnesium l-threonate
Abantu abanengxaki yokulala kunye nokungabikho kokujolisa basebenzise oku kongezwa-iMagnesium l-threonate epakishwe ngeVitamin-C threonate kuba iyenza ibe phezulu ekufumanekeni ngokuthelekiswa nezinye izongezo zeMagnesium l-threonate. Isongezelelo sinokubanakho ukuwela isithintelo segazi-sobuchopho esibonelela ngemagniziyam eyaneleyo kwingqondo kunye nokwandisa amandla okuqonda. Ngokudibanisa i-magnesium kunye ne-theanine kunye nezinye iiminerali ezibalulekileyo, umzimba unokubonelelwa ngesondlo semihla ngemihla ngaphandle kokunciphisa ezinye iivithamini kunye neeminerali.
I-Magnesium l-threonate iphucula inkumbulo kumntu okhulileyo ongaphezulu kwama-50 kunye nophethwe sisifo sengqondo esixhalabisayo, isifo sika-Parkinson okanye iimpawu ezibuthathaka zemithambo-luvo.
Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kokongeza kuphucula inkumbulo, kukhulisa amandla okuqonda kunye nokufunda malunga neepesenti ezilishumi elinesibhozo kwisithuba seentsuku ezingamashumi amathathu ukuya kumashumi amathandathu. Yenza isiphumo sokuthomalalisa kunye nokuphumla kwiimisipha kwaye inike ukomelela kwangoko komzimba kunye nokuqonda.
Abanye abantu bakufumanisa kufanelekile ukuthatha olu ncediso kwifom yepilisi njengoko kukho i-gelatin egubungele iipilisi eziphakathi ngokomgangatho, ekulula ukuzigwinya kwaye kulula ukuzetyisa. Iipilisi ezigutyungelwe kwi-gelatin zisusa ityhefu kwinkqubo yokwetyisa
Umxholo we-threonate kwisongezelelo ususa ukudinwa komzimba kunye nokuqonda, kukhuthaza ukulala ngokuphumla komzimba. Izinto ezilungileyo zokulala ekuthinteleni i-syndrome yomlenze ongazinzanga (imeko ebangela umnqweno ongalawulekiyo wokuhambisa imilenze) kunye namaphupha aluhlaza.
Xa isongezelelo sathathwa ngaphezulu kweentsuku ezingamashumi amathathu, saphucula ukugxila kunye nokunciphisa inkungu yengqondo kunye nokuphakamisa amandla okuqonda okubangele ukwanda kokujolisa kunye nemveliso ngakumbi ngexesha lomsebenzi, ngelixa ufunda, ufunda okanye uqhuba nawuphi na umsebenzi womzimba.
Isongezelelo kufuneka sithathwe ngokutya okanye ngaphambi kokuba ulale. I-RDA zii-capsule ezintathu ukuya kwezine ngosuku kunye nokutya, kodwa inokusetyenziswa emva kokutya naxa amaphecana okwetyisa esebenza kakhulu ngeli xesha, enika iziphumo ezikhawulezayo.
Isongezelelo sineziphumo ebezingalindelekanga ezincinci. Esichaseneyo siquka isisu esibuhlungu kwaye ezibuthathaka ziintloko okanye ukozela. Ke, kunokuthiwa iMagnesium l-threonate ikhuselekile ngokupheleleyo ukuba ingathathwa njengesongezelelo yonke imihla ngaphandle kweziphumo ebezingalunganga.
Ungayithenga phi iMagnesium l-threonate?
Ngethamsanqa, abavelisi abaninzi, abathengisi kunye neempawu bathengisa isongezelelo esimangalisayo-iMagnesium I-threonate. Ifumaneka ngokulula kwi-intanethi kwaye kufuneka ukuba ungabinangxaki yokuyithenga. Nangona kunjalo, inye into ekufuneka uyigcine engqondweni kukuba eyona inexabiso eliphantsi ayisiyiyo. Ngalo lonke ixesha jonga olona phawu lubalaseleyo, umthengisi othembekileyo nodumileyo kunye nomenzi, oqinisekisiweyo inkqubo yokuvelisa kunye nokugcina
E-Australia, isongezelelo siyafumaneka kuzo zombini iifom kunye nefomule. Imveliso iyafumaneka njenge-Neuro-Mag Magnesium l-threonate Powder
Price -AUD 43.28
Iinkcukacha zokongeza malunga nemveliso
Ukusebenza kobungakanani be-1 scoop (malunga. 3.11 gram)
Ukukhonza ngesiqulatho ngasinye malunga ne-30
Umsebenzi omnye wokuncedisa (i-Neuro-Mag® Magnesium l-threonate) ibonelela nge-2,000 milligram ye-magnesium l-threonate, eguqulela kwi-144 milligrams ye-ultra-absorbable elemental Mg. Ubuchopho buthabatha ngokulula isongezelelo sokomeleza impilo yengqondo kunye nokuqonda kolutsha. Uncedo olongezelelekileyo ekugcineni unxibelelwano lwe-synaptic phakathi kweeseli zengqondo kunye nokunyusa indlela esempilweni yokubonisa iiseli. Kuyinto emnandi, isiqhamo setropiki esineziqhamo esiphucukileyo.
I-citric acid, i-acacia yegum, i-maltodextrin, iincasa zendalo, isicatshulwa se-stevia, i-silica.
ECanada, isongezelelo siyafumaneka njenge-Naka Platinum Magnesium l-threonate
Price -I-CAD 46.99
Yongeza iinyani malunga nemveliso
I-Naka Pro's Pro MG12 Magnesium l - threonate ifumaneka njengoncediso eCanada ibonakalisiwe kuphela kwendlela yemagniziyam enokunyusa amanqanaba emagniziyam kwingqondo. Iqulethe i-144 milligrams ye-Mg kunye ne-2000 milligrams ye-magnesium l-threonate PRO MG12 inokukhusela ubuchopho ekuthotyeni kwenkumbulo kunye nokuphucula iimpawu zesifo se-Alzheimer kwangoko.
Izithako - Idosi nganye yeephilisi ezintathu iqulethe iMagnesium l-threonate 3 milligram (i-2000 milligram ye-elemental Mg)
Izithako ezingezizo ezamayeza
I-Microcrystalline cellulose, i-magnesium stearate (umthombo wemifuno), i-hypromellose (i-capsule ingredient)., Iqukethe i-NO eyongeziweyo ye-gluten, amantongomane, amaqanda, iimveliso zobisi, intlanzi okanye i-shellfish, iimveliso zezilwanyana, ingqolowa, imibala okanye i-flavour, ingqolowa okanye igwele.,
I-Magnesium l-threonate powder United Kingdom
EUnited Kingdom, isongezelelo siyafumaneka kuzo zombini iifom kunye nefomule. Ikwayimveliso enye efumaneka e-Australia.
Gcina ivaliwe ngokuqinileyo kwindawo epholileyo neyomileyo
I-Magnesium I-threonate-inyathelo elilandelayo
I-Magnesium ibalulekile kwimpilo yomzimba kunye nokuba sempilweni kwengqondo. Olona nyango lubalulekileyo kunyango lwempilo yengqondo yemagniziyam iphambukisiwe kukungakwazi kwayo ukungena ngaphakathi kukhuseleko lobuchopho. I-Magnesium I-threonate iyakwazi ukujongana noku ngokungena ngqo kwimimandla yobuchopho oyifunayo. Njengokuba uninzi lwabantu lusokola kukuphazamiseka kwengqondo ngenxa yokunqongophala kwemagniziyam emzimbeni wabo, kufanelekile ukunika umpu kwiMagnesium I-threonate powder ekuphuculeni amandla engqondo okujongana nengxaki.
Ulwazi olunikiweyo lusekwe kwizixhobo zophando nakwiziphumo. Oku akwamkelwanga yi-FDA kwaye ayenzelwanga ukuchonga, ukunyanga okanye ukuthintela nasiphi na isigulo okanye iingxaki zempilo.
Ngenxa yokuba uLawulo lwezoKutya kunye neDrug alulawuli izongezo ngendlela efanayo njengoko ivavanya kwaye ibeka esweni iziyobisi, kufuneka umntu ajonge iimveliso eziqinisekiswe ngabantu besithathu, njenge-NSF International (uvavanyo lwemveliso yaseMelika, uhlolo kunye nombutho wokuqinisekisa), IiLabhoratri, okanye iiLebhu zeLabhoratri, zokhuseleko kunye nomgangatho.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, cinga ukuthintela izongezo eziqulathe naziphi na izinto ezenziwayo, ezinjengemibala yokufakelwa, iincasa kunye nezinto ezisigcinayo.
Xu T, Li D, Zhou X, Ouyang HD, Zhou LJ, Zhou H, Zhang HM, Wei XH, Liu G, Liu XG. Ukusetyenziswa ngomlomo kwe-Magnesium-L-Threonate Attenuates Vincristine-indved Allodynia and Hyperalgesia by Normalization of Tumor Necrosis Factor-α / Nuclear Factor-κB Signaling. Unyango lweentsholongwane. Jun ka-2017; 126 (6): 1151-1168. doi: 10.1097 / ALN.0000000000001601. I-PubMed PMID: 28306698.
U-Wang J, uLiu Y, u-Zhou LJ, u-Wu Y, uLi F, uShen KF, uPang RP, u-Wei XH, uLi YY, uLiu XG. I-Magnesium L-threonate iyathintela kwaye ibuyise ukusilela kwememori okunxulumene nentlungu ye-neuropathic ngokunqanda i-TNF-α. Ugqirha Obuhlungu. I-2013 Sep-Oct; 16 (5): E563-75. I-PubMed PMID: 24077207.
UMickley GA, Hoxha N, Luchsinger JL, Rogers MM, Wiles NR. Ukutya okungapheliyo kwe-magnesium-L-threonate isantya sokuphela kwaye kunciphisa ukubuyiswa okuzenzekelayo komkhwa wokunambitha okumiselweyo. IPhemacol Biochem Behav. 2013 ngoMeyi; 106: 16-26. doi: 10.1016 / j.pbb.2013.02.019. Epub 2013 Mar 6. I-PubMed PMID: 23474371; I-PubMed Central PMCID: PMC3668337.